पुरुषले गर्ने स्थायी बन्ध्याकरण के हो ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य पुरुषले गर्ने स्थायी बन्ध्याकरण के हो ?
पुरुषले गर्ने स्थायी बन्ध्याकरण के हो ?
२१ पुष २०७४, शुक्रबार २२:२६
भ्यासेक्टोमी पुरुषले गर्ने स्थायी बन्ध्याकरण हो । यो सुरक्षित सामान्य शल्यक्रिया हो । यो शल्यक्रिया गर्दा पुरुषको अण्डकोषथैलीमा एउटा सानो प्वाल पारी त्यहींबाट दुबैतिरका शुक्रकीटबाहिनी नली (वीर्यनली) बाँधेर काटिन्छ । भ्यासेक्टोमी गरेपछि पुरुषको यौन षमतालाई कुनै असर गर्दैन। भ्यासेक्टोमी गरिसकेपछि ३ महिनासम्म यौन सम्पर्क गर्नपरेमा पुरुषले कण्डम प्रयोग गर्नुपर्छ । किनभने शुक्रकीटबाहिनी नलीमा रहिरहेको शुक्रकीट नख्रिन करीब ३ महिना लाग्छ।
भ्यासेक्टोमीले कसरी गर्भ रोक्छ ?
भ्यासेक्टोमी गर्दा पुरुषको अण्डकोशमा एउटा सानो प्वाल पारी त्यहींबाट शुक्रकीट नलीहरु काटेर बाँधिन्छ । शुक्रकीट आउने दुवै नली बन्द गरेपछि शुक्रकीट आउन पाउँदैनन् । महिलाको डिम्ब र पुरुषको शुक्रकीट भेट हुँदैन र गर्भ रहन पाउँदैन । तर भ्यासेक्टोमीले एचआइभी र यौन रोग सर्नबाट बचाउँदैन । त्यसैले एचआइभी र यौन रोग सर्नबाट बच्न कण्डमको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ।
भ्यासेक्टोमी कस्ता पुरुषलाई उपयुक्त हुन्छ ?
सन्तानको रह पुगिसकेको
एचआइभी संक्रमित र एड्स भएको अथवा एन्टीरेट्रोभाइरल औषधि –एचआइभीको औषधि) सेवन गरिरहेका पुरुषले
भ्यासेक्टोमी गरिसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
ज्वरो आएमा, घाउ पाकेको शंका लागेमा अथवा सुन्निएर दुखेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउनुपर्छ।
भ्यासेक्टोमी गरेपछि ३ महिनासम्म यौन सम्पर्क गर्दा अनिवार्य रुपमा कण्डम प्रयोग गर्नुपर्दछ । वीर्य जाँच गर्ने सुबिधा भएको ठाँउ छ भने भ्यासेक्टोमी गरेको ३ महिनापछि वीय जाँच गराएर शुक्रकिट भए नभएको यकिन गर्नु अझ राम्रो हुन्छ।
भ्यासेक्टोमी गरेको १ हप्तासम्म साइकल, घोडा वा रुख चढ्ने जस्ता काम गर्नु हुँदैन।
भ्यासेक्टोमी गरेपछि विशेष परिस्थितिमा शुक्रबाहिनी नली जोडाउन पनि सकिन्छ । तर, नली जोडेपछि बच्चा हुन्छ नै भन्ने यकिन गर्न सकिंदैन।
भ्यासेक्टोमी गर्न चाहने पुरुषहरुलाई जानकारी
भ्यासेक्टोमी गर्न चसो वा जाडो मौसम नै कुर्नु पर्दैन, जुनसुकै महिनामा पनि गर्न सकिन्छ।
बन्ध्याकरण गरेको घाउ ५/७ दिनपछि आफैं निको हुन्छ।
नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा १ हप्तापछि जचाउन जानुपर्छ।
भ्यासेक्टोमी गरिसकेपछि कम्तिमा ३ महिनासम्म यौन सम्पर्क गर्दा कण्डमको प्रयोग नगरेम गर्भ रहन सक्छ।
भ्यासेक्टोमी सम्बन्धी वास्तविकताहरु
भ्यासेक्टोमी गरेपछि पुरुषलाई ढाड दुख्ने वा कमजोर हुने हुँदैन र पहिलेको जस्तो गाह्रो कामहरु गर्नसक्छन्।
भ्यासेक्टोमी गरेपछि पुरुषको पुरुषत्व घट्ने, सम्भोगकार्यमा कमी आउने अथवा कम उत्पादनशील हुने कुनै पनि समस्याहरु हुँदैनन्।
भ्यासेक्टोमी पश्चात् सम्भोगमा स्खलन हुने वीर्यको मात्रा, बाक्लोपन अथवा स्वरुपमा केही पनि पहिलेभन्दा फरक हुँदैन तर वीर्यमा शुक्रकीटहरु हुँदैनन्।
भ्यासेक्टोमी गर्नु भनेको खसी पार्नु होइन। भ्यासेक्टोमीबाट अण्डकोषको कार्यहरुमा जस्तै शुक्रकीट तथा हर्मोन उत्पादनमा कुनै असर गर्दैन। स्वास्थ्य खबरपत्रिका
Previous articleम्याग्दीमा परिवार नियोजनको स्थायी बन्ध्याकरणमा पुरुष अगाडी
Next articleमहोत्सवमा कृषि, पर्यटन र जडिबुटीलाई प्राथमिकता